Paompy sy dosing fametrahana ho an'ny takelaka sy tsiranoka
Mampiasa vokatra marobe ve ianao? Voangona ao anaty kaontenera IBC ve ny vokatrao ary tianao halefa tsy tapaka amin'ny fizotry ny famokarana anao? Avy eo ianao dia mety mila paompy sy fametrahana doka ho an'ny dity sy ranoka. Avelao izahay hanome anao rafitra mandeha ho azy, ahafahana miantoka ny fizotry ny famokarana mitohy miaraka amin'ny famindrana ho azy ireo kaontenera vokatra. Ny famokaranao dia tsy mila mijanona vao mifamadika amin'ny fitoeran-javatra vaovao na rehefa tsy mandeha ny paompy amin'ny alàlan'ny fampiasana tanky buffer sy pumps parallèle.
Mila manao fifangaroana na dilovina misy singa maromaro? Hamolavola vahaolana anaty tankina ho an'ny dosie sy ny fifangaroana isika hahatratrarana ny vokatra ilainao.
Sarotra ny manompa ve ny vokatrao? Afaka manatanteraka izany isika miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro.
Rafi-pitaterana motera vita fanamboarana ho any amin'ny tsipika mifangaro.